राम बहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न आदेश, प्रहरीको टोली पुग्नु आगाडी नै बेपत्ता ! – Pradesh Online Khabar
विश्वकै शक्ति देश अमेरिका कोरोनासामू निरीह !
राम बहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न आदेश, प्रहरीको टोली पुग्नु आगाडी नै बेपत्ता !
जीबन शैली / धर्म शास्त्र / विचार / समाचारNo Comment on राम बहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न आदेश, प्रहरीको टोली पुग्नु आगाडी नै बेपत्ता !
काठमान्डौ ,तपस्वीको भेषमा बस्दै आएका राम बहादुर बमजनलाई पक्रन नेपाल प्रहरीको टो’ली शुक्रबार बिहान उनको सिन्धुली स्थित आश्रम पुगेको छ। ह’त्या- हिं’सा, ब’लात्कार तथा आनीहरूलाई बे’पत्ता पारेको आ’रोप लागेका बमजनलाई बिहान छ बजेदेखि प्रहरीले आश्रम र वरिपरीको जंगलमा खोजेपनि भेटाएको भने छैन। आश्रमस्थित उनी बस्ने मूल घरमा ता’ला लागेको प्रहरी स्रोतले बतायो। प्रहरी स्रोतका अनुसार सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट बिहीबारै बमजन प’क्राउको अ’नुमति लिइएको थियो। उनि माथि एक अ’नुयायीको ह’त्या गरेको, तीन आनी,एक अ’नुयायीलाई बे’पत्ता पारेको र कम्तिमा एक आनीलाई ब’लात्कार गरेको आरोप छ।
आनीहरू सर्लाहीकी रिता वोट, नुवोकोटकी कर्मा तामाङ र मकवानपुरकी फुलमाया रूम्बा बमजनका आश्रमबाट बे’पत्ता पारिएका छन्। त्यस्तै बमजनका दुई अ’नुयायी बाराका सुरेश आलेमगर र मकवानपुरका सञ्चमान वाइबा पनि उनको सिन्धुली स्थित आश्रमबाट बे’पत्ता छन्। बमजनको आदेशमा वाइबालाई उनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा कु’ट्दाकुट्दै मा’रिएको प्र’त्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। आलेमगरलाई र’क्ताम्मे अवस्थामा आश्रममा देखेको पनि प्र’त्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ। त्यसयता उनी बे’पत्ता छन्। त्यस्तै बमजनले उनकै आश्रममा बस्ने नावालक आनी गंगामाया तामाङलाई कर’णी गरेको आ’रोप छ।
गंगामायाले डेढवर्षअघि काठमाडौंमा पत्रकार स’म्मेलन गर्दै आफूमाथि बमजनले कर’णी गरेको आ’रोप लगाएकी थिइन्। अहिले गंगामाया काठमाडौं स्थित बालबालिकाको हि’तमा काम गर्ने एउटा सं’स्थाको सं’रक्षणमा बसेकी छन्। केही महिनासम्म प्रहरीले अनुसन्धान जा’री राखे पनि पछि त्यो काम सु’स्ताएको थियो। अनुसन्धानले गति न’लिएपछि दुई महिनाअघि प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै मा’तहतमा वि’शेष टोली परिचान गरेर अनुसन्धानलाई तिब्रता दिएका थिए। सोही अनुसन्धानको नि’चोडका आधारमा प्रहरीले बमजनलाई प’क्राउ गर्न जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट अ’नुमति मा’गेको हो।
यस्तै,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारमा रहेको आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको छ।बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीदेखि व्यापारीसम्म गरी एक सय ७५ लाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।तर बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ।उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको अख्तियारको भियोगपत्रमा भनिएको छ।
रेग्मीले आफू अधिवक्ता हुँदा बालुवाटारको उक्त जग्गा वकालत गरेवापत लिएको बताइएको छ।एजेन्सी।